1 Anisoade a Amos a ɔka Tekoa+ nguanhwɛfo ho no hui wɔ Israel+ ho ni. Eyi sii wɔ Yuda hene Usia+ ne Israel hene Yeroboam+ a ɔyɛ Yoas+ ba no bere so, mfe abien ansa na asasewosow+ no reba. 2 Na ɔkae sɛ: “Yehowa fi Sion bɛbobom+ na wafi Yerusalem ama ne nne so;+ na awerɛhow besi nguanhwɛfo mmoa adidibea na Karmel atifi awo wosee.”+ 3 “Nea Yehowa aka ni, ‘“Damasko+ bɔne a ɛto so abiɛsa ne nea ɛto so anan nti, merentwe nsan, efisɛ wɔde dade awiporow ade aporow Gilead.+ 4 Na mede ogya+ bɛto Hasael+ fie mu na ahyew Ben-Hadad+ aban akɛse no. 5 Mebubu Damasko+ adaban no, na metwa nea ɔte Bikat-Awen no afi hɔ na mayi nea okura ahempoma no afi Bet-Eden; na Siriafo bɛkɔ akɔyɛ nkoa wɔ Kir,”+ Yehowa na waka.’ 6 “Nea Yehowa aka ni, ‘“Gasa+ bɔne a ɛto so abiɛsa ne nea ɛto so anan nti, merentwe nsan, efisɛ wɔfaa nnipadɔm nnommum+ de wɔn kɔmaa Edom.+ 7 Na mede ogya bɛto Gasa+ fasu mu na ahyew n’aban akɛse no. 8 Na metwa nea ɔte Asdod+ no afi hɔ na mayi nea okura ahempoma no afi Askelon;+ na mɛdan me nsa+ aba Ekron so,+ na Filistifo a wɔaka bɛyera,”+ Awurade Tumfoɔ Yehowa na waka.’ 9 “Nea Yehowa aka ni, ‘Tiro+ bɔne a ɛto so abiɛsa ne nea ɛto so anan nti, merentwe nsan, efisɛ wɔfaa nnipadɔm nnommum de wɔn kɔmaa Edom, na wɔankae anuanom ntam apam no.+ 10 Na mede ogya bɛto Tiro fasu mu na ahyew n’aban akɛse no.’+ 11 “Nea Yehowa aka ni, ‘Edom+ bɔne a ɛto so abiɛsa ne nea ɛto so anan nti, merentwe nsan, efisɛ ɔde nkrante tiw ne nua,+ na ɔsɛee ne mmɔborɔhunu,+ na n’abufuw tetew ne hanam mu daa, na n’abufuhyew dɛwee bere nyinaa.+ 12 Na mede ogya bɛto Teman+ mu na ahyew Bosra+ aban akɛse no.’ 13 “Nea Yehowa aka ni, ‘“Ammon+ bɔne a ɛto so abiɛsa ne nea ɛto so anan nti, merentwe nsan,+ efisɛ wɔpaapaee Gilead mmea a wɔyem mu de trɛw wɔn ahye mu.+ 14 Na mede ogya bɛto Raba+ fasu mu na ahyew n’aban akɛse no, ɔkoda mu nteɛteɛm mu, ne ahum da mu gyampantrudu mu.+ 15 Na wɔn hene ne ne mpanyimfo nyinaa bɛkɔ nkoasom mu,”+ Yehowa na waka.’